Ngwaọrụ igbochi ọrụ oke na Windows | Akụkọ akụrụngwa
Ọ bụrụ na ịhapụ kọmputa gị naanị nwa oge, ị gaghị enwe ike ịma ma ọ bụrụ na mmadụ abanyela iji nyochaa ozi echekwara na ya, site na onye na-enyocha faịlụ ahụ. Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na draịvụ draịva enweghị ihe na-emebi ma kama, na faịlụ ndị ahụ bụ akụkụ nke ọrụ dị mkpa nwere ike ịnọ n'ime ya.
Nke a bụ isi ihe mere anyị kwesịrị ịmụta nile di iche iche nke jikoro na- Mkpọchi ma òké na kiiboodu site na kọmputa anyị Windows; Ọ bụrụ na anyị ga-aga nke ọma, anyị nwere ike ịhapụ otu ahụ naanị na ịmara na ọ nweghị onye ga-enwe ike ịbanye iji nyochaa ihe anyị zọpụtara na draịvụ ike, ihe anyị nwere ike iji ngwaọrụ ole na ole anyị ga-ekwu n'okpuru.
Nke a bụ otu n'ime ngwaọrụ kachasị mfe ma dị mfe iji, nke ị nwere ike ibudata ma wụnye kpamkpam n'efu na Windows.
Mgbe ị zutere ihe mbụ achọrọ, naanị ị ga-agba ya site na ịpị ịpị akara ngosi nke ụzọ mkpirisi ya. N'oge ahụ ị ga-enwe mmasị a obere window na a countdown counter (sekọnd ise) na mgbe ị na-eru ọgwụgwụ, ọ ga-emechi ọrụ nke ma òké na kiiboodu. Backlaghachi na-arụ ọrụ na kọmputa ahụ, ihe niile ị ga - eme bụ iji njikọta igodo CTRL + ALT + DEL wee pịa igodo ESC, bụ ebe anyị ga - anọ na desktọọpụ Windows ọzọ. N'ebe a ị gaghị achọta nhọrọ ndị ọzọ ma ọ bụ ohere ịnweta paswọọdụ ịbanye Windows.
Enwere ike iwere nke a dị ka ngwa ọrụ kachasị mkpa n'ụwa, n'ihi na mgbe anyị budịrị ya ma mee ya, anyị ga-enwe mmasị naanị obere windo na-ese n'elu mmiri nke ga-apụta n'ihu ihe niile ọdịnaya dị ugbu a na desktọọpụ Windows.
Ọ bụrụ na ịhapụ kọmputa a na nchedo a, onye ọ bụla nwere ike ịmasị windo nke ngwa ndị ị na-arụ ọrụ, n'agbanyeghị na ha agaghị enwe ike ịme ihe ọ bụla ma ọlị n'ihi na a ga-egbochi ha niile. Ugbu a, onye nrụpụta ngwaọrụ a kwuru na obere windo na-ese n'elu mmiri (dị ka nseta ihuenyo gara aga) na ị ga-achọta na a stratejik ebe nke mere na ọ dịghị onye nwere ike ịhụ ya, n'ihi na ọ bụrụ na mmadụ pịa obere "X" ọ ga-emechi windo a na-akpaghị aka ma ya mere onye ọ bụla nwere ike iji kọmputa ahụ.
3. Igodo umuaka
Ngwaọrụ a zuru oke karịa ndị anyị kpọtụrụ aha n’elu. Na mgbakwunye na inyere anyị aka igbochi ọrụ nke ma keyboard na òké, ọ nwekwara ohere nke igbochi ọrụ nke tray nke draịvụ CD-ROM anyị, ịnweta draịvụ ike yana ọbụlagodi, gbachiri bọtịnụ ike.
Site na ọrụ ikpeazụ a anyị kwuru, ọ nweghị onye ga-enwe ike gbanyụọ kọmputa ahụ site na ịpị bọtịnụ a.
Maka ndị na-achọghị igbochi keyboard na òké niile, akụrụngwa a nwere ike ịbụ azịza ya. Anyị ga-eji ya kọwaa ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ka emechie omume ndị sitere na ịpị aka ekpe, aka nri ma ọ bụ n'etiti oke anyị.
E wezụga nke ahụ, ị ​​nwekwara ike nweta abigbachi ụfọdụ keyboard ọrụ ma hapụ ndị ọzọ ole na ole ka anyị nwere ike iji mee ihe n'oge ọ bụla. N'adịghị ka ngwaọrụ anyị kpọtụrụ aha n'elu, ebe a enwere ike ịkọwapụta okwuntughe iji mee ka ngwa ahụ ghara ịdị irè.
5. Igodo Keyboard
Anyị nwedịrị ike ịkọwa na ngwá ọrụ a nwere nnukwu myirịta na nke anyị tụrụ aro na mbido.
Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na ngwá ọrụ a nwekwara ohere nke mkpọchi keyboard na ọrụ oke, na-adabere na a minimalist interface ebe naanị anyị ga-akọwapụta okwuntughe iji nwee ike ijikwa ngwa ọrụ a arụ ọrụ.
Anyị nwere ụzọ ise anyị nwere ike iji oge ọ bụla na anyị ga-ahapụ naanị kọmputa nkeonwe nke Windows, nke ga-enyere anyị aka n'ụzọ bụ isi, chebe ozi na draịva ike na na ikekwe, dị ezigbo mkpa maka ụdị ọrụ na ọrụ ọ bụla anyị na-arụ n'oge ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » 5 Nhọrọ iji kpọchie ma ọ bụ gbanyụọ ma keyboard na òké na Windows
Mmekọrịta: ngwá ọrụ ịkekọrịta keyboard na òké na kọmputa ndị ọzọ